I-China Shaohong ifriji encinci yomoya enezinto ezili-9, iRoaster, iBroiler, iRotisserie, iDhydrator, isitovu, iToaster, isitovu sePizza kunye nokuzifudumeza. Ibandakanya incwadi yokupheka. Ukuya kwi-500 ° F. Amandla amakhulu aKhulu, onke asisiXhobo esinye. Yenziwe ngentsimbi eshayinayo. I-AFO 46045 SS. Abavelisi be-MO-02DHY kunye nababoneleli | UShao Hong
Incinci ngokwaneleyo ukuba ilingane kwi-countertop yakho okanye phezulu kwetafile kodwa inkulu ngokwaneleyo ukudala ukutya kuyo yonke intsapho. I-Shaohong yefryer encinci yomoya kunye nesitya seglasi sokupheka ngokubanzi esinokubamba ukuya kwi-14 yeekota.
Ukupheka okunempilo kwenziwa lula. Amaqondo obushushu kunye nokucwangciswa kwamaxesha amancinci okulungelelanisa umoya ophelileyo kuphelisa isidingo seoyile eyongezelelweyo Iinketho ezisempilweni azinamda- Ukupheka, ukubhaka, iGrill, iStram Broil, kunye neRast & Air-Fry.
Isitshizi somoya esincinci seShaohong ukulungiselela ixesha lokupheka elikhawulezayo xa kuthelekiswa nee-oveni eziqhelekileyo Ilebhu evavanyelweyo ukuqinisekisa ukuchaneka kunye nesantya Esonga ixesha ekhitshini ngaphandle kokubingelela incasa
Amaqondo obushushu aphezulu kunye nefeni eyakhelwe-ngaphakathi ijikelezisa umoya ukutya okufumileyo kunye okunencasa Ukupheka kakuhle kwaye kugcina incasa yesithako eyahlukileyo Ukuya kuthi ga kwiyure yokupheka kufanelekile ngokutya, inyama yenyama, inyama yehagu, inkukhu, imifuno nokunye
Iglasi elinomtsalane lenza ukuba kube lula ukucoca ukusebenziseka lula kolawulo olujikelezayo, ii-racks zokupheka ngeengcingo ezi-2, kunye nezipleyiti zepleyiti zenza ukutya nokulungiselela ukutya impepho
Ukuthotyelwa komgangatho wokhuseleko we-GS A-13.
Inkqubo evuselelayo yelungelo lokushicilela ethi iifrimu zomoya ezi-1kg ezinamafutha asezantsi eFransi.
Kulula ukusebenzisa isibali xesha lwedijithali kunye nokuseta ubushushu ngomboniso weLCD.
Iyunithi epheleleyo yokupheka iyonke, yokupheka, ukugcoba, ukubhaka, i-barbeque, i-steam, i-broil, i-dehydrate, i-defrost kunye ne-air-fry.
Isiciko seglasi esicace gca kukhuseleko lokutya.
Ukupheka amaqondo obushushu ukusuka kuma-65ºC ukuya kuma-220ºC (149ºF - 428ºF).
Ukulawula isantya esiphakamileyo / esisezantsi.
Ipani yokuhlambela isishushu esikhuselekileyo.
Yongeza umthamo ngokongeza umsesane wokukhupha.
Ukucima ngokuzenzekelayo xa isiciko siphakamisiwe.
Egqithileyo I-Shaohong air fryers iyathengiswa, i-Roaster, i-Broiler, i-Rotisserie, i-Dehydrator, i-Oven, i-Toaster, i-Pizza kunye ne-Warmer. Ibandakanya incwadi yokupheka. Ukuya kwi-500 ° F. Amandla amakhulu aKhulu, onke asisiXhobo esinye. Yenziwe ngentsimbi eshayinayo MO-06DHY
Okulandelayo: I-Shaohong Air Frier enezixhobo ezili-9, i-Roaster, i-Broiler, i-Rotisserie, i-Dehydrator, i-Oven, i-Toaster, i-Oven yePizza kunye nokuzifudumeza. Ibandakanya incwadi yokupheka. Ukuya kwi-500 ° F. Amandla amakhulu aKhulu, onke asisiXhobo esinye. Yenziwe ngentsimbi eshayinayo. I-AFO 46045 SS, MO-02MHY
Umoya womoya ococekileyo we-oven yeFryer ye-Infrared Co ...
Itreyi yomoya yokuhambisa oven ioyile yoMoya, C ...
Ve Ukuthengiswa sesitovu Infrared Halogen Stainless Stee ...
IShaohong foodie grill kunye nefry yomoya, 13QT Air F ...
Kitchenaid ve kitve kit toasterasterasteraster iimpepha zokushicilela ombhoyi Convection C ...